10 lakilen'ny fahombiazana ho an'ireo orinasa mampiasa media sosialy | Martech Zone
Alakamisy, May 14, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany maraina dia nihaona tamin'ny orinasa iray aho ary nizara betsaka araka izay azoko natao momba ny fomba sy ny antony anaovan'ny orinasa teknolojia media sosialy.
Orinasa betsaka loatra no nilentika voalohany ary avy eo nanandrana nandamina ireo olana taty aoriana saingy mino aho fa mety hanimba tanteraka ny fahombiazan'ny orinasa izany. Matetika loatra isika dia tsy mahazo vintana faharoa hampihatra paikady media sosialy. Misy fasana mitombo ny tetik'asa haino aman-jery sosialy nilaozana, ao anatin'izany ny bilaogin'ny orinasa, natombok'ireo orinasa misy mpiasa manan-talenta sy fikasana lehibe.
Ny fitandremana fambolena fototra lehibe dia hahafahan'ny orinasa misitraka tombony betsaka kokoa amin'ny fampiharana ny haitao haino aman-jery sosialy hitehirizana vola, hampitombo ny vola miditra ary hanatsara ny fifandraisana amin'ireo mpiasa, mpanjifa ary ny vinavina.
Platform - Tsy ampy ny mampiasa izay ampiasain'ny olon-drehetra raha ny momba ny orinasanao. Ny sehatra rehetra dia tokony hojerena amin'ny fiarovana, tsiambaratelo, backup, fikojakojana, fanatsarana, fanohanana fampidirana ary koa fahatakarana ireo loharano ilaina hampiharana sy hitazomana ireo sehatra.
Transparency - zava-dehibe ho an'ny orinasa ny manaiky fa tsy tranokala io ary tsy toerana hanaovana spam. Ny mpiasa, ny vinavina ary ny mpanjifa dia maniry anao hampiasa media sosialy satria te hahafantatra ANAO izy ireo ary hahatakatra tsara ny fomba hahasoa azy ireo ny fifandraisana aminao.
tapaka - Tsy maintsy manatanteraka ny andrasan'ny olona amin'ny atiny sy ny vanim-potoana. Tsy haingam-pandeha ny haino aman-jery sosialy, fa hazakazaka hazakazaka marathon izay matetika mitaky loharanon-karena be dia be mba hampidirana azy ireo mialoha.
Passion - Ny fahombiazanao dia miankina betsaka amin'ny fitadiavana loharanon-karena olombelona izay tia mpanelanelana. Ny fanaovana mpiasa mahatohitra hampihatra sy hampiasa haino aman-jery sosialy dia haneno tsy ho ela ary hiafara amin'ny tsy fahombiazana.
Fandraisana anjara - Ny fahefan'ny media sosialy dia isa isa. Ny fanehoan-kevitra sy ny tambajotra dia mitarika ny fifamoivoizana sy ny laharana amin'ny media sosialy. Tsy maintsy mampiroborobo sy manome valisoa ny fandraisana anjara ianao… indrindra amin'ny andro voalohan'ny fitomboana.
vahana - Miaraka amin'ny tsy fitoviana, zava-dehibe ny fanekena fa tsy zavatra anao ny media sosialy Alefaso. Ny fitomboana sy ny fahombiazana dia mitaky ezaka maharitra, tsy miato ary tsy miova.
komity - Ny fahasamihafana amin'ny fampiharana dia hiteraka vokatra tsara kokoa satria ny mpiasa samihafa dia voasarika (ary matetika variana) amin'ny fitaovana samihafa. Zava-dehibe ny hizaran'ny ekipa paikady sy tanjona hanomezana lalana.
fandrindrana - Ny hetsika ara-tsosialy alefa amin'ny silo dia mihamitombo ary matetika tsy mahomby. Ny fampidirana vatana eo anelanelan'ny mpanelanelana, ny automatisation ny atiny ary ny fandrindrana eo amin'ny sampana dia tsy maintsy ilaina hampitombo haingana ny programa. Mampiroborobo ny hetsika sosialinao amin'ny tranokalanao sy amin'ny mailaka. Atosory eo anelanelan'ny tsirairay ny votoatiny handotoana ny fifamoivoizana amin'ny fomba mahomby.
Fanaraha-maso - Fametrahana fanairana sy fanaraha-maso Analytics hamela ny ekipanao handray andraikitra miorina amin'ny zavatra hita.
tanjona - Ireo orinasa dia mirona amin'ny fidirana anaty haino aman-jery sosialy nefa tsy mieritreritra izay tena tadiaviny ho tratrarina na ahoana no handrefesany ny fahombiazana. Ahoana dia mandrefy ny fahombiazanao amin'ny programa media sosialy ianao? Kely ny serivisy ho an'ny mpanjifa? Mpanjifa bebe kokoa? Fanatsarana ny fahombiazan'ny mpiasa? Mieritrereta alohan'ny hitsambikanao!
Ny iray amin'ireo fampitahana tiako omena orinasa dia ny fijerena ny Burj Dubai. 800 metatra ny halavany ankehitriny, ny Burj Dubai no ho trano fanaovana trano lehibe indrindra eto an-tany. Amin'izao fotoana izao, tsy misy tena mahalala ny halavan'ny trano… ny tompony dia manohy manitatra ny halavany kasaina hatao.
Ny lakilen'ny fahaizany miakatra ambony dia ny fototra tsy voatanisa izay nananganana ilay trano. Ny fototra Burj Dubai dia misy korontam-bato 192 mivelatra mihoatra ny 50 metatra mankamin'ny tany, mandrakotra 8,000 metatra toradroa, ary ao anatin'izany ny beton 110,000 taonina!
Ny fandaminana sy ny fananganana paikady media sosialy ataon'ny orinasanao dia hiantohana fa miorina amin'ny fototra izay hanampy ny programa media sosialy hitombo tsara mihoatra ny fanantenan'ny rehetra. Miakara fohy ary ny orinasanao dia tsy fahombiazan'ny risika - zavatra mahazatra loatra.
May 14, 2009 ao amin'ny 11: 47 PM
Tiako ny ampahany # 5 - ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana sy mahafa-po. Lahatsoratra mahafinaritra… misaotra.